Kedu ihe kpatara ọhụụ nke Nwanyị Nwanyị Nwanyị Medjugorje? - Ngụda na Alaeze ahụ
Medjugorje bụ otu n'ime saịtị ngosipụta “gbasiri mbọ ike” n'ụwa niile. Na Mee nke afọ 2017, ọrụ nke Pope Benedict XVI guzobere ma bụrụ onye onye isi ala Kadịnal Camillo Ruini kwubiri nyocha ya banyere mpụta. tozuru oke nke nghota odidi nke ike asaa nke ijuanya. Na ọnwa Disemba nke afọ ahụ, Pope Frances buliri mmachi na njem ndị a haziri diocesan, na-ebuli Medjugorje n'ọkwa ụlọ arụsị. Onye nnọchianya Vatican bụ Achịbishọp Henryk Hoser ka ọ bụrụkwa onye pope họpụtara ka ọ na-elekọta nlekọta nke ndị njem ala nsọ ebe ahụ, na-ekwupụta na July 2018 na obere obodo ahụ bụ "isi iyi amara na ụwa niile." Na mkparịta ụka onwe onye ya na Bishọp Pavel Hnilica nwere, Pope John Paul II kwuru, "Medjugorje bụ n'ihu, mgbatịkwu nke Fatima." Ruo ugbu a, ngosipụta na amara ndị so na-emepụta ihe karịrị narị ọgwụgwọ anọ edepụtara, ọtụtụ narị ọkpụkpọ oku nye ndị nchụaja, ọtụtụ puku ministri n'ụwa niile, na ọtụtụ mgbanwe na ọtụtụ oge mgbanwe.
Ozi sitere n’aka ndi hụrụ anyị n’anya nke Medjugorje
Medjugorje - Gosiri na Jisos Ebiliwo
Ekwela ka ọnwụnwa mee ka obi gị sie ike ma mee ka ekpere dị ka mbara ọzara.
Ozi ise nke Medjugorje
Ozi nke Medjugorje bụ oku nye Nchigharị, chigharịkwuru Chineke. Nwaanyị anyị nyere anyị okwute ise ma ọ bụ…
Ihe na ozi, Videos, Maka gịnị?.
← Gịnị kpatara Pedro Regis?
Gini kpatara Ohu Chineke Luisa Piccarreta? →